/blog/Gallery/Synephrine HCL Powder - Gubasho dufan iyo miisaan lumis Dheeri ah
Posted on 11 / 25 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Maanta, boqolkiiba dad aad u badan ayaa raadinaya ikhtiyaarro si loo ilaaliyo culeys caafimaad leh. Hagaag, dhammaantood dhexdooda, isticmaalka Synephrine budada HCL waa mid ka mid ah qaababka ugu nabdoon ee aad ku ilaalin karto dufanka aan caafimaadka qabin. Budada Synephrine waa walxo kiimiko ah alkaloid oo aan dhif ahayn in la helo. Waa walax dabiici ah oo laga helay dhirta sida oranji qadhaadh, iyo kuwa kale.
Qaabka unugyada budada ee Synephrine waxay la mid tahay tan ephedrine, taas oo ah midka ugu weyn ee gubida gubashada. Si kastaba ha noqotee, Efesrine aan suuqa ugu jirin sidii cunto dheeri ah; halkan, Synephrine ayaa ah beddelkeeda ugu fiican. Octamine waa dheef-shiid kiimikaadka Synephrine waxayna ilaa iyo hadda caan ku tahay astaamaha gubashada dufanka.
Synephrine waa firfircoon daciif ah alfa-1 iyo alpha-2 adrenoreceptors. Labada shaqadood iyagoo ka jawaabaya adrenaline waxay keenayaan kordhinta qofka dhiig karka iyo garaaca wadnaha. Sidaa darteed, Synephrine 5985-28-4 uma badna inay sababi karto koror ku dhaca garaaca wadnahaaga ama cadaadiska dhiiggaaga.
Taasi waa farqiga ugu weyn ee u dhexeeya ephedrine iyo Synephrine 5985-28-4, maadaama ephedrine loo yaqaanay inay dhaqaajiso labadaba alpha-1 iyo alpha-2 adrenoreceptors si xoogan.
Synephrine HCL sidoo kale waxay kicisaa soo dhoweynta neuromedin U2. Kuwani waa molikulal ku yaalliin hypothalamus oo kordhiya feejignaanta.
Synephrine waxay shaqeysaa iyadoo la joojinayo soosaarka eotaxin-1. Taasi waa molecule oo tilmaamaysa eosinophils-ka inuu u guuro aagga la qaboojiyey. Waxay sidoo kale xannibaysaa waxqabadka NADPH ee oxidase, oo ay soosaareyso 'neutrophils' oo taa badalkeed, waxay abuurtaa noocyo badan oo firfircoon oo oksijiin ah.
(1) Synephrine HCL ee Miisaanka Maansada
Baruurta xad dhaafka ahi maahan khatar caafimaad, laakiin waxay waliba kaa yeeli kartaa inaad u muuqato mid xun. Gubidda dufanka ayaa leh faa iidooyin waaweyn, oo ay ka mid tahay in aad cimri dheeraato. Nasiib wanaagse, isticmaalka Synephrine HCL waa mid ka mid ah istiraatiijiyadaha la xaqiijiyay ee aad u isticmaali karto inaad ku naaxiso baruurta jirka. Waa tan sida ay kaaga caawinayso inaad gaaritaanka yoolkan gaadho;
Khasab kuguma ahan inaad gasho goobta jimicsiga oo aad dareento dhamaan daal iyo hurdo; Synephrine ayaa ku helay. Waxay u shaqaysaa sidii shidaal iyada oo ku quudinaysa dhammaan tamarta aad u baahan tahay si aad u hesho kal-fadhi shaqo-dilaaga dilaaga ah. Jiirka loo maamulo Daawada budada ah Waxaa la arkay inay awood u dabaasha dheer, taasoo muujineysa in heerarkooda tamar ay kordheen.
Iyadoo la horumarinayo heerarka tamarta, Synephrine waxaa lagu yaqaanaa inay sare u qaado waxqabadka isboortiga sidoo kale. Saamaynta isku dhafan ee korodhka kharashka tamarta ee dufanka iyo kicinta waxay kor u qaaddaa waxqabadka waxayna kordhisaa xaddiga wax soo saarka ee labadaba jimicsiga jimicsiga jirka iyo jimicsiga jirka. Taasi waxay ka dhigeysaa mid dheeraad ah oo ka-hor-ku-tababbaran iyo a baruurta sidoo kale.
Taasi waa habka jabinta dufanka jirka. Waxaa si wanaagsan loogu sharaxay dheef-shiid kiimikaadka. Synephrine waxay shaqeysaa iyadoo kordhisa heerka dheef-shiid kiimikaadka qofka markaa ka dhigeysa mid shidaal gubasho deg deg ah. Waxay sharraxaysaa sababta qaadashada Synephrine ay kugu kalifayso inaad gubtid dufanka badan maxaa yeelay marka dheef-shiid kiimikaadku aad u sarreeyo, jirkaagu wuxuu u badan yahay inuu gaaro dufanka keydsan si uu u helo wax badan.
Qiyaasta Synephrine HCL way ku kala duwantahay qof ilaa qof kale. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta caadiga ah sida a miisaanka lumay miisaanka waa 100mg maalin kasta. Cilmi baarista, si kastaba ha noqotee, waxay muujineysaa in qiyaasta Synephrine HCL ee 35mg sidoo kale ay tahay mid wax ku ool ah. The Qiyaasta Synephrine HCL waa inaanay ka badnaan 200mg maalin si looga fogaado sunta.
Marka la eego saameynta jirka ee Synephrine ama sida dufanka oo gubta, waa inaad hubisaa inaad ku qaadato waxa ugu horreeya subaxnimada iyo shan iyo toban illaa soddon daqiiqo jimicsiga. Waxaa lagugula talinayaa inaad biyo ku qaadato.
Halka dadka qaarkiis ay doorbidaan inay iskood u qaataan Synephrine, dadka kale waxay door bidaan inay xiraan. Waxaad u isticmaali kartaa isku darka budo kale oo miisaan lumis ah iyo waliba kuwa kor u qaadaya tamartaada. Yohimbine wuxuu si fiican u xiraa Synephrine, gaar ahaan hadafkaaga ugu weyn waa inaad miisaan lumiso.
Shaki la'aan, Synephrine HCL waa xifdinta qoduuska ah ee budada miisaanka lumisa. Waxay kaa caawineysaa inaad yareyso rabitaankaaga cuntada haddii aad higsaneyso inaad wax ka yar cuno ama yareyso qaadashada cuntada fudud ee aan caafimaadka laheyn. Xitaa waad go'aansan kartaa inaad cuntadaada ka yareysid Waxyaabaha loo yaqaan 'supefrine' afar iyo labaatan saacadood haddii aad rabto inaad qaab dhakhso leh u hesho.
Haddii loo isticmaalo si lagu daro cunto macquul ah iyo jimicsi, waxaad ku arki doontaa dhismaha jirka ee Synephrine iyo miisaanka oo yaraada muddo laba toddobaad gudahood ah marka la isticmaalo. Qofkasta oo la halgamaya cunida fudud, xad-dhaafka ah, ama qof dareemaya inuu doonayo inuu ka takhaluso dufanka jirkooda, tani waa heshiiska dhabta ah!
Hadda oo aad go'aansatay inaad gaarto yoolalka miisaankaaga, xaggee baad ka helaysaa ninkan gubanaya? In alla inta shirkado badan ay kuu balan qaadi karaan inay ku siiyaan Synephrine ugu fiican, waa inaad aad uga taxadartaa sida qaar laga yaabo inay qaar kuu iibiyaan waxyaabo been abuur ah. Waxaan ku siinaynaa qiime lacagtaada anaga oo ku siinayna supplements Synephrine oo aamin ah oo wax ku ool ah. Markaad iibsan Synephrine anaga naga hel, waxaa laguu hubaa inaad gubi doontid baruur oo aad u dufan doontid xaydh dhakhso iyo joogto ah.
Kaabista miisaankayaga ayaa dib-u-dhigis la'aan ah maadaama ay yihiin 100% dabiici ah oo aan lahayn waxyaabaha ku darsan. Ka dalbo maanta budada miisaanka 'mucjisada' luminta miisaanka oo inaga lumiya rodolyada aan loo baahnayn sidoo kale ku raaxeyso faa'iidooyinka jir dhiska Synephrine.
Tilmaamaha Xirfadlaha Caafimaadka ee Kaabista cuntada, waxaa qoray Shawn M. Talbott, Kerry Hughes, bogga 13
Nooca Qalabka Nololeed ee ugu Fiican Aniracetam Pain for Strengthening